Muuri News Network » Dowlada Masar oo Rajo beel ku riday Arinta ictiraafka Somaliland.
Dowlada Masar oo Rajo beel ku riday Arinta ictiraafka Somaliland.
Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay qoraal Waswaaradda arrimaha dibedda Masar ay ka soo saartay booqasho wefti ka socday dhowaan ku yimaadeen Hargeysa.
Warsaxaafadeed shalay lagu baahiyey barta wasaarada Arrimaha Dibedda Masar, kuna saxeexnaa Mr. Maxamed Idris, madaxa wasaaradda arrimaha dibadda Masar u qaabilsan arrimaha Afrika oo weftiga Hargeysa tegay hogaaminayey ayaa lagu sheegay inay la kulmeen masuuliyiin tiro badan socdaal ay ku tageen caasimada Gobolka Somaliland ee Hargeysa, taasoo u muuqata in Masar ay ku liideyso isla markaana aqoonsaneyn sheegashada Somaliland ee ah in aysan Somalia waxba ugu darsaneyn.
Masar oo jiritaanka Somaliland liidday dhulkana ku jiidday iyo Somaliland oo hanjabaad yaab leh uga jawaabtay arrintan 1